Sister Zipora uye Rachael zvakaratidzwa yekubvutwa | Apg29
"Seiko, nei kurumidzai mukasadaro kuparidza? Unogona here kuona? Hapana zvimwe nguva!"
aiita zvose kuti kuipa, hapana akataura kana kuparidzwa pamusoro yekubvutwa. Munhu wose sokuti vakabatikana nezvinhu zvavo pachavo. Pakarepo kukavapo yekubvutwa.
Ndakabvunza, uye patakakumbira rakasvika apo Ishe Jesu Kristu, uye nengirozi vasingaverengeki mumba. Nepo Michael uye Gabriel, uye ivo rwakagadzirira nzira kubwinya Mambo apo akauya. Jesu akashungurudzika zvikuru. Akadanidzira uye akandiratidza zvaiitika mudenga mazuva maviri apfuura.
Mwari akabva akapa kuti ngirozi vachiridza nehwamanda yokupedzisira. Apo ngirozi kuvhuvhuta dzawaona Jesu panyika. Akaona ufeve, upombwe, zvakaipa, vanhu vakanga vasina kuteerera Mwari.
Zvino Jesu wakati achizviona, vaimhanyira tsoka aBaba, vakawira pasi uye akatanga kuchema, uye akakumbira nguva yakawanda uye akati:
Jesu akadanidzira kwazvo, uye Baba saka tsitsi pamusoro nyika, asi akati:
Iye waneta Kumbomira.
Asi baba vakati mutumwa:
Mutumwa haana hwamanda, asi akaramba ari kuitawo. Jesu akabva ati: kuti vaifanira kunge vatora nzvimbo mazuva maviri adarika. Jesu wakadanidzira akati:
"Akadiniko mwoyo kuita ivo? Stone Mwoyo? Kudai ndakanga yasvika mazuva maviri adarika, vakawanda asiyiwa, vamwe vomumhuri yako. Nhasi aizova zuva pakutambudzika kukuru."
"Vana O vangu, uyai kwandiri ikozvino. The kutambudzika kukuru vachava zvinotyisa kudaro. I akapikira haana kusiya kana kukurasa, asi nei akandisiya? Mwoyo wangu Pin vana vangu vakandisiya!"
Beloved usiku, last ndaiva chiratidzo yekubvutwa. Ndakaona nyika yakanga chaizvo zvakawanda mumabasa. Rakanga kuti zvose aizoramba sechainge zvose pamwe. Ndakatarisa zvishoma nezvishoma achifamba pasi mumugwagwa wedu, kumbotamba kana ndakatarisa shure kwangu, Jesu. Akati,
Ndakaona kuti zvakaitika musi weSvondo, uye vazhinji vakanga vasara shure. Mukereke apo chete mufundisi wake mudzimai zvakakwidzwa, vakanga vakatendeka chete. Rwaamai pamuviri kunyangarika, asi vakaramba.
Ipapo ndakaona vaKristu vaifunga kuti vaiva vakatendeka, asi vakanga vasara, uye ivo vaiva mupumburu umo zvavo zvakanyorwa. Ndakaona mufundisi akanga aripo apo agamuchira rwakapetwa zvivi kuti akaita kuti akaramba. Akatanga kudanidzira:
"Naizvozvo imwiwo ivai makagadzirira; nekuti neawa zvakadai ramusingafungiri, Mwanakomana wemunhu anouya!" Mateu 24: 44
"Rangarirai Roti hustru.den vanoda kuwana upenyu hwake acharasikirwa nahwo, asi ani naani anorasikirwa noupenyu hwake achahuponesa!" Lk.17: 32, 33